Toerana 4 fitsidihana any Portugal | Vaovao momba ny dia
Portugal dia tany feno tanàna amoron-tsiraka, tanàna mahafinaritra ary toerana feno hatsarana sy tantara. Tsy isalasalana fa efa naheno momba ireo toerana malaza indrindra isika rehetra, ary tianay hiresaka aminao momba ireo indrindra ireo. Toerana efatra tadiavin'ny mpandeha rehetra fitsidihana any Portugal.
ireo toerana efatra no tena ilaina an'i Portugal, saingy fantatray fa misy zoro sy toerana maro hafa mety hahaliana. Hikarakara ireo andro hafa ireo isika, satria tsy maintsy manomboka amin'ireo zava-dehibe indrindra. Raha mbola tsy nitsidika azy ireo ianao dia afaka manao lisitra hiampitana ireo toerana fantatrao izay fantatrao.
Ny renivohitr'i Portugal dia iray amin'ireo toerana itiavantsika azy, satria tanàna misy tantara sy toerana mahafinaritra hahitana azy. Miakara amin'ny Lisitr'i Uptown amin'ny tram io dia iray amin'ireo kilasika lehibe eto an-tanàna, saingy mbola betsaka ny zavatra azontsika atao, ankoatry ny fandehandehandeha mamaky ny arabe amin'ilay tanàna taloha. Tsidiho ny Castle of San Jorge, izay manjaka amin'ny tanàna iray manontolo ary manana fomba fijery mahatalanjona, midina mankany amin'ny Torre de Belem, tilikambo mpiaro taloha, na mandehana mamaky ny faritry La Baixa, raha efa reraky ny tehezan-tanàna ianao, hahitana ny Kianja Restauradores na ny Kianja Rossio.
Lavitra kokoa dia hitantsika ny Valan-javaboary Nations, toerana maoderina izay mifanohitra amin'ny hakanton'ilay tanàna. Ity ny Oceanarium, izay aquarium lehibe indrindra any Eropa. Somary lavitra ny afovoany no ahitantsika ny Monasiteran'i Jerónimos, toerana iray ilaina hitsidihana azy. Nambaran'ny UNESCO ho vakoka manerantany izy ary eo amin'ny manodidina an'i Belem. Monasiteran'ny taonjato faha-XNUMX mahatalanjona izy izay manana iray amin'ireo jirofo tsara tarehy indrindra.
Porto no toerana faharoa malaza indrindra any Portiogaly ary manana antony ampy hahatongavana amin'ny toerana tsy manam-paharoa izy. ny ribeira an'ny renirano Douro Manintona tokoa izy io, ary mandalo azy ny sambo, izay mpizahatany ny sasany, noho izany dia afaka manararaotra manao dia kely hatrany amin'ny ony isika. Azontsika atao koa ny miampita ny tetezana Don Luis I mankany amin'ny morontsiraka hafa, mankany Vilanova de Gaia, izay ahitantsika ny famokarana divay tena ilaina amin'ny divay malaza Port. Tsy azontsika atao ny manadino ny fivarotam-boky Lello malaza, izay nalaina sary an-tsary an'i Harry Potter, ary tsara kokoa ny mandeha mandritra ny herinandro, satria amin'ny faran'ny herinandro dia misy filaharana lava be hidirana ao.
Etsy ankilany, misy tsangambato mahaliana sasany, toy ny Torre de los Clérigos na ny Palacio de la Bolsa. ny Ny Katedraly Porto dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary izy io dia iray amin'ireo tranom-pivavahana tranainy indrindra. Ary tsy tokony hanadino ny Mercado do Bolhao, tsena tranainy indrindra eto an-tanàna, tamin'ny taonjato faha-XNUMX isika. Ary raha manam-potoana sisa isika, dia afaka mankany amin'ny gara any Sao Bento, izay hankafizantsika ny fandravahana ny taila mahazatra. Na dia tsy misy isalasalana aza, ny tsara indrindra ao Porto dia avy amin'ny fahaverezana eny amin'ny arabe tery sy taloha.
Ny faritra Algarve dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo faritra mpizahatany indrindra eto Portiogaly, ary anisan'ireo toerana ahitantsika an'i Albufeira, izay iray amin'ireo malaza indrindra. Ity tanàna amoron-tsiraka ity dia manana fizahan-tany amoron-dranomasina betsaka mandritra ny vanim-potoana fahavaratra, saingy mbola betsaka ny zavatra azo jerena. Ao amin'ny Ranomasina mpanjono, izay fantatra indrindra ao amin'ny faritra, afaka mankafy toerana tena afovoany sy torapasika izay toerana teo aloha nisy hetsika lehibe nataon'ny mpanjono tao amin'ilay faritra ianao. Amin'ny manodidina dia misy moron-dranomasina hafa, toa an'i Oura, Aveiros na Peneco.
ny Rava rava ao amin'ny da da daila Izy ireo dia sisa tavela amin'ny villa romana izay taratry ny fandalovan'ny Romana namakivaky ity faritr'i Portugal ity. Fitsidihana iray hafa dia ny an'ny Paderne Castle, iray amin'ireo fito naseho tamin'ny saina Portiogey ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ho an'ireo liana te hahafantatra bebe kokoa momba ilay faritra dia manana ny Museum Museum of Archaeology izy ireo.
Aveiro dia fantatra amin'ny hoe Venise portogey. Tanàna ara-barotra taloha izay nampiasa ny moliceiros, izay sambo mahazatra, hitaterana entana, ary lasa manintona mpizahatany ankehitriny. Ity tanàna ity dia manana lakandrano roa sy tranon'ny kanto deco kanto, noho izany dia ilaina ny mandeha mamaky ny arabe. Ao Aveiro dia azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Convent of Jesus, izay misy ny tranombakoka ao an-tanàna, na ny Catedral da Sé, izay eo anoloana ny tranombakoka. Any ivelan'ny tanàna dia tsy afaka mijanona tsy mijery ireo moron-dranomasina akaiky isika. Malaza tokoa ny moron-dranomasin'i Barra ary manana toeram-pisakafoanana misy trano fisakafoanana sy kafe, na dia tsy isalasalana fa ny sary nalaza indrindra dia ny an'i Costa Nova, izay misongadina noho ny tranony voaravaka dian-kapoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Toerana 4 tokony hitsidihanao any Portugal
Ireo trano fisakafoanana ambony tsara indrindra any Tokyo